Winner: CCASA Achievement Award & Finalist: Specialist Law Firm of the Year, 2018 African Legal Awards
Home MAYELA NATHI Imbali
Le Kliniki yezoMthetho ikwiikhotheji ezine zeVictoria kwiSitrato iCrozier. Ezi khotheji ziziindawo zamagugu yaye zibumba inxalenye yomqolo weekhotheji eziqhawu-qhawukileyo ezintlanu ezisusela ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19. Ngowe-1968, imithi yom-oki ekwiSitrato iCrozier yavakaliswa njengamagugu elizwe.
Ngo-2 Matshi 1975, i-Stellenbosch University Juridical Society (i-Society), iziko elimela abafundi bomthetho, lafaka isicelo esibhaliweyo kwingotya yeCandelo lezoMthetho. Lo Mbutho wacela isigunyaziso kwiCandelo lezoMthetho sokumiselwa kweskimu soncedo lwezomthetho oluphakanyiswayo (iSkimu). Esi Skimu sasijoliswe ekunikelweni kweenkonzo zomthetho zasimahla kubahlali nokunikela umlinganiselo othile woqeqesho olusebenzisekayo lwezomthetho kubafundi bezomthetho.
ICandelo lezoMthetho lagunyazisa iSkimu yaye samiselwa nge-16 ka-Aprili 1975.
Esi Skimu sasiqhutywa ngabafundi bezomthetho abaphambili abanikela uncedo lwezothetho phantsi kweliso labezomthetho abasuka kwiCandelo lezoMthetho kwakunye neenkampani zabucala ezingaphandle kweYunivesithi yaseStellenbosch. Kuqala iinkonzo zazinikelwa ubusuku obunye ngeveki kwisikolo sasekuhlaleni yaye zazijolise ekunikeleni uncedo lwezomthetho kwabebala nabantsundu bommandla waseCloetesville.
IBhunga leYunivesithi yaseStellenbosch lagunyazisa ukuvulwa (okuyinxenye) kwe-SU kubafundi ‘abangekho mhlophe’ okwesihlandlo sokuqala, kuphela kubafundi abaphumelele kwizifundo ebezingafumaneki kubo kwezinye iindawo zaseNtshona Kapa.
Ebudeni bowe-1987, iskimu soncedo lwezomthetho satshintsha saba yiKliniki yoNcedo lwezoMthetho esebenza ngokupheleleyo. I-Stellenbosch University Legal Aid Clinic yayisebenza phantsi kwezibele zeCandelo lezoMthetho kwiYunivesithi yase-Stellenbosch yaye ngoko yayisele inee-ofisi zayo ekwakuncedwa kuzo abantu kwiSitrato i-Crozier.
Ngowe-1988 kwatyunjwa uMlawuli wokuqala weStellenbosch University Legal Aid Clinic, uNkszn. uLutricia Roos, oligqwetha eliphumeleleyo. Kanti wayelibhinqa lokuqala elalinguMphathi kwiKliniki yoNcedo loMthetho eMzantsi Afrika.
Ngowe-1995, i-Stellenbosch University Legal Aid Clinic yavelisa nayo igqwetha lokuqala elibhinqileyo elagqiba amanqaku alo njengommeli kwiKliniki yoNcedo lwezoMthetho eMzantsii Afrika. Ngaphambili, amanqaku ayenokugqitywa kuphela kwinkampani yezomthetho yabucala.
Kantii ngowe-1995 ii-ofisi zeKliniki yoNcedo lwezoMthetho zathutha zaya kutsho kwindawo eyayisakuba yi-Lückhoff School kwiNdlela iBanhoek, phakathi kwi-"Die Vlakte" (isi-Afrikaans see“Fleti”), eyayisisikolo sokuqala samabanga aphezulu sesi-Afrikaans sabantwana bebala eBholani.
Ngowe-2018, iKliniki yoNcedo lwezoMthetho iye yatshintsha igama. IKliniki yoNcedo lwezoMthetho yatshintshwa kwathiwa yiKliniki yezoMthetho yeYunivesithi yaseStellenbosch ukuze imele ulungelelwano olungakumbi nowona msebenzi wale Kliniki, engajongananga kuphela nokulungiselelwa koncedo lwezomthetho, kodwa ikwaquka ukuqhutywa kwemfundo yezomthetho neluncedo.
Ngowe-2018, le Kliniki yabuyela kwiSitrato i-Crozier, emelene ngqo noCandelo lezoMthetho. Olu tshintsho luneenzuzo ezininzi, eziquka ukuba kufutshane neCandelo lezoMthetho ngaloo ndlela eziquka ukwabelana ngezinto zezomthetho. Kanti oku kwenza le Kliniki ifikeleleke ngakumbi kubahlali ebancedayo (ekubeni ikufutshane nerenke yeeteksi ekwiSitrato iBird, nto leyo eyenza le Kliniki ibe kufutshane ebantwini).
Fax: +27 (0)21 887 6270